Monday January 11, 2021 - 10:30:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Melleteriga dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in ay laayeen hoggaamiyaal sarsare oo katirsanaa Jabhadda Qowmiyadda Tigreega ee TPLF loo yaqaan.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska howlgallada waqooyi ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in howlgal shalay ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Tigray lagu dilay 15 xubnood oo katirsan jabhadda TPLF islamarkaana lagu qabtay 8 mas'uul sida hadalka loo dhigay.
Telefeshinka ku hadla afka xukuumadda Addis Ababa ayaa Jeneraal katirsan ciidanka Difaaca Itoobiya kasoo xigtay in saraakiisha laqabtay uu kamid yahay Abaay weldu oo ahaa madaxweynihii hore ee ismaamulka Tigray.
Warka kasoo baxay melleteriga Itoobiya ayaa lagu xaqiijiyay in ladilay taliye ku xigeenkii hore ee booliska ismaamulka Tigreega balse illaa iyo hadda wax war ah oo arrintan xaqiijinaya kamasoo bixin dhanka Kooxda TPLF.
Wariyaasha ayaa sheegaya in ay adagtahay sida loo rumeysto sheegashooyinkan isdaba joogga ah ee ka imaanaya xukuumadda Abiy Axmed oo si aad ah loogu wiiqay dagaallada ay kula jirto qowmiyadda Tigreega.
Jimcihii lasoo dhaafay ayay aheyd markii xukuumadda Xabashida ay sidaan oo kale u sheegtay in ay qabatay saraakiil sarsare oo katirsan jabhadda Tigreega.
Boqolaal qoys oo kasoo jeedo dalka Qadar ayay sanado kadib usuurtagashay in ay lakulmaan ehelladooda oo ku sugnaa dhanka Sacuudiga.